I-DPA's 6066 I-subsetature ye-Micraphic Mic Mic Iphakanyiselwe Umklomelo We-TEC Ohlonishwayo - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-DPA's 6066 Subminiature Headset Mic Mic Eqokelwe Umklomelo We-TEC Ohlonishwayo
I-DPA's 6066 Subminiature Headset Mic Mic Eqokelwe Umklomelo We-TEC Ohlonishwayo
I-AllEROED, NOVEMBA 5, 2019 - Ama-Microphones e-DPA' I-6066 Subminiature Headset Microphone ungumuntu ophakanyisiwe wemiklomelo ye-35th yonyaka ye-NAMM Technical Excellence & Creativity (TEC) esigabeni seMicrophones - Isigaba Sokuqinisa Umsindo. Imikhiqizo eqokelwe ukuthola Umklomelo we-TEC yenze umthelela omkhulu kumisindo yanamuhla nomculo. Ine-capsule elinganisa ngamamilimitha amathathu kuphela ububanzi, imakrofoni ye-6066 ingahle ibe yincane, kepha inamandla ngokusebenza - okwenza lesi sixazululo sibe yilowo okhetha uMklomelo we-TEC.
Ifaka ubuchwepheshe be-CORE ngobuchwepheshe be-DPA, i-mic inciphisa ukuhlanekezela, ikhulisa ububanzi obunamandla futhi ifaka ububanzi bemvamisa ye-20Hz-20kHz kanye naphansi komsindo we-24dB kuphela (A). I-6066 futhi isizuzela kwisethingi eyenziwe kabusha, engasindi, nosayizi owodwa-wonke ifinyelela phezu kwezindlebe ukuthola induduzo ephezulu futhi ifaka nomshini wentwasahlobo ongena ngaphansi kwekhanda / izindlebe zokuphepha okungeziwe. Iphinde yathola umklomelo we-Red Dot design ngokuklama kwayo okusha futhi okusebenziseka kalula.
"Sifaka isikhathi esiningi namandla ekwakheni imakrofoni yehedse enhle futhi isebenzisa zonke izici esizifunayo kwiphakethe elincane," kusho uRené Mørch, umphathi wemikhiqizo, i-DPA Microphones. “I-capsule yechungechunge le-6000 yincane kunazo zonke esake saliklama. Kwakudinga ukusebenza onqenqemeni lwalokho okwenzeka ngokomzimba ukuze uthole umsindo odumile we-capsule yemililitha emihlanu ye-4066 ungene kwikhompiyutha entsha yemamilimitha amathathu ye-6066. Inhloso ngemuva kwalesi microphone bekuwukukhiqiza isisombululo esingahle singabonakali, kubo bobabili ababukhoma futhi basakaze izithameli, ngenkathi sinikeza umsindo ocacile we-crystal. I-6066 ihlakaniphile futhi ibukeka kahle, futhi ayekethisi kwikhwalithi yomsindo. "
Kusukela kwethulwa, i-6066 Subminiature Headset Microphone ithole ukubuyekezwa kwe-rave. Idizayini yayo ephephile, engasindi, engabonakali futhi enethezekile, ehlanganiswe nekhwalithi yemisindo ephakeme ye-DPA, iholele ekuthengisweni okubalulekile emhlabeni wonke nakuzo zonke izigaba zemakethe ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukusakaza, imidlalo yaseshashalazini kanye nomsindo obukhoma.
“Kuyasijabulisa njalo ukuqashelwa umsebenzi wethu, kepha kunomvuzo owengeziwe ukwazi ukuthi senze imisebenzi yamakhasimende ethu yaba lula, yabenza bakwazi ukuthola imiphumela engcono,” kunezela uMørch. "Besilokhu sithola impendulo enhle kangaka kusuka kubonjiniyela abasebenza ngomsindo we-veteran design ephezulu ye-6066. Kwa-DPA, sifuna ukuzwa impendulo yamakhasimende ethu - yikho okusishukumisela ukuthi sidale izixazululo ezenziwe ngokukhethekile ukuze zilungele izidingo zabo. Empeleni kuyimakrofoni ebabazekayo futhi ukuthi ukuqokelwa Umklomelo we-TEC wudumo olukhulu kangako. ”
Kwethulwa yi-NAMM Foundation, ama-NAMM TEC imiklomelo ethulwa minyaka yonke ukugubha umphakathi we-pro audio, ukubona abantu, izinkampani kanye nezinto zobuchwepheshe ngemuva kokuqoshwa komsindo kwanamuhla, ukusebenza okubukhoma, amafilimu, ithelevishini nokunye. Imiklomelo ye-NAMM TEC izobanjelwa ngokubambisana ne-NAMM Show ngoMgqibelo, Januwari 18, 2020 e-Anaheim, eCalifornia.
I-DPA Microphones yikhiqiza ehamba phambili e-Danish Professional Professional yomxazululo wekhwalithi yekhwalithi yekhwalithi eliphezulu yezinhlelo zokusebenza zobuchwepheshe. Umgomo wokugcina we-DPA ukuhlinzeka njalo ngamakhasimende ayo ngezixazululo ezingcono kakhulu zemakrofoni yazo zonke izimakethe zayo, ezifaka umsindo ophilayo, ukufakwa, ukurekhoda, indawo yaseshashalazini kanye nokusakaza. Uma kuziwa enkambweni yokuklama, i-DPA ayithathi izinqamuleli. Futhi ingabe inkampani ingathobeli inqubo yayo yokukhiqiza, eyenziwa ekhiqiza iDPA eDenmark. Ngenxa yalokho, imikhiqizo ye-DPA idunyiswa emhlabeni wonke ngokucacile okucacile nokucacile, izincazelo ezingalinganiselwe, ukuthembeka okuphezulu futhi, ngaphezu kwakho konke, umsindo omsulwa, ongenakulinganiswa nokungaxhunywanga. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uvakashele www.dpamicrophones.com.
Ama-TSL Products 'Anwetshiwe Wokulawulwa Okusakazwayo Kwezinhlelo Zokuhlangabezana Nezidingo Zemvelo Yokukhiqizwa Kwezemidlalo - Disemba 12, 2019
I-Remote Sports Broadcasting Q&A enomsindo we-Audio engineer uChad Robertson - Disemba 12, 2019
I-NUGEN Audio Ehlonishwe Umkhiqizo WaseShayina - Disemba 12, 2019
I-6066 Subminiature Headset Microphone Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ama-Microphones e-DPA I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor NAMM I-NAMM 2019 I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Imiklomelo yama-TEC Ubuchwepheshe be-TV Umlingisi wevidiyo	2019-11-05
Ngaphambilini: IMarshall Electronics ingenisa amakhamera amabili amasha we-IP (H.265) nge-30X Optical Zoom
Olandelayo: U-El Camino: Umqambi Omubi Webhasikidi Uphetha Umxube We-Crystal-Clear nge-Lectrosonics